Eriri Optic PLC Splitter Manufacturers & Suppliers - China Fiber Optic PLC Splitter Factory
Eriri optic PLC splitter, na-akpọ planar waveguide ciruit splitter, bụ a ngwaọrụ mepụtara iji kee otu ma ọ bụ abụọ ìhè ibé ọkụ mbadamba uniformly ma ọ bụ ikpokọta otutu ìhè doo na otu ma ọ bụ abụọ ìhè ibé. Ọ bụ ngwaọrụ pụrụ iche ma nwee ọtụtụ ntinye na ntanye mmepụta nke a na-ejikarị na netwọk ikuku na-agafe agafe (GPON, FTTX, FTTH).
PLC splitter na-enye a ala-na-eri ìhè nkesa ngwọta na elu kwụsie ike na ntụkwasị obi, ọgwụgwụ capped ibu nke njikọta bụ 1 * 2, 1 * 4, 1 * 8, 1 * 16, 1 * 32, 1 * 64 SC / APC ma ọ bụ SC / UPC.
Jera na-enye eriri optic cable splitter gụnyere:
1) Eriri optic PLC Cassette splitter
2) Obere PLC Kaseti splitter
4) Nwa eriri PLC splitter （Blockless PLC splitter）
Jera cassette PLC splitter with agbanwe agbanwe arụmọrụ, obere ngwa anya Insertion ọnwụ, ala polarization dabere Loss, elu pụrụ ịdabere na nkwụsi ike, elu gburugburu ebe obibi na n'ibu e ji mara, na ngwa ngwa echichi.
Na-eche ihu na mmụba na-aga n'ihu nke nnukwu bandwidth, anyị chọrọ ntinye ngwa ngwa, ndị PLC splitters na-enye ihe iji nye njikọ fiber optic n'oge nrụpụta netwọkụ FTTX na PON. PLC splitter na-enye ndị ọrụ ohere iji otu netwọk PON interface, na-abawanye ikike onye ọrụ nke netwọụ fiber optical, ma na-enye ihe ngwọta kachasị mma maka ndị na-ewu netwọkụ.
Biko chere free ton kpọtụrụ anyị maka ọdịnihu ọmụma.